February 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Feb 29, 2016 0
Axmad	 Feb 29, 2016 0
Baarlamaanka dalka Masar oo aan wax badan ka duwaneyn kan ka jira magaalada Muqdisho marka lo eego dhanka Akhlaaq darada, waxaana dhowr jeer dhacay gacan qaad ka dhexeeya Xillibaanada iyagoo isku buuqa. Dhawaan ayaa mid kamid ah…
Si aad u hesho wararkii u dambeeyay, dhageyso warka duhurnimo war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan. Dhageyso Warka Duhur 29 02 2016.lite
Dhageyso:Korneel Sheegay inaysan waxba soo Kordhin doonin isbadalka ammaan Ee Muqdisho.
Taliska nabad sugida oo gacanta ka taagay ka hortagida weerarada shabaabul Mujaahidiin ayaa ammaanka Muqdisho ku wareejiyay maamulka Gobalka Banaadir. Kulan ka dhacay Muqdisho oo ay kasoo qeybgaleen saraakiil Ciidan ayaa laga sheegay in…
Iyadoo maalintii labaad ay galeyso waqtigii ay bilaabatay Xabad joojinta u dhexeysa Nidaamka iyo Kooxaha Mucaaradka, ayaa hadana waxaa muuqata in Ruushka iyo dabadhilifkiisa Bashaar aysan u hogaansamin Xabad joojintaas. Diyaaradaha…
Si aad u hesho wararkii u dambeeyay, dhageyso warka subaxnimo war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan. Dhageyso Warka Subax 29 02 2016.lite
guuleed	 Feb 28, 2016 0
guuleed	 Feb 28, 2016 1
Si aad u hesho wararkii u dambeeyay, dhageyso warka duhurnimo war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan. Halkan Ka Dhageyso War duhur 28-02-2016
Axmad	 Feb 28, 2016 0
Sida ay sheegeen Ilo amaan oo lagu kalsoonaan karo dagaalyahanno katirsan dowladda Islaamiga ah ayaa la wareegay deegaano dhaca duleedka magaalada Baqdaad, kuwaas oo Istiraatiji ah. Ciidamo katirsan kuwa Mujaahidiinta ayaa si qarsoodi ah…
Maalintii shalay oo Sabti ahayd waxaa dalka Afgaanistaan ka dhacay weeraro xoogan, kuwaas oo ay fuliyeen Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Dhaalibaan. Weerarada dhacay oo tiradoodu gaarayso illaa labo Weerar ayaa waxay ka…